Mawaini - Chenin Blanc Yambiro: Kubva kuYummy kuenda kuYucky
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Waini - Chenin Blanc Yambiro: Kubva kuYummy kuenda kuYucky
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Culinary • tsika nemagariro • France Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Waini & Midzimu
Mazambiringa chikamu chewaini dzemujagi kubva kuCalifornia uye anowanikwa muwaini chena kubva kuSouth Africa… muLoire Valley chete ndipo panosvika zita reVouvray rakazara - rinomhanya kubva kune simbi kusvika kune kutapira kwakasimba. Yambiro shoma inodiwa: kutsvaga Vouvray pane iyo label haivimbisi yakanaka Chenin Blanc. Kuti udzivise OOPS, sarudza kubva kune vakanyanya kugadzira.
• 2019 Domaine Pinon, Vouvray, Sec. 100 muzana Chenin Blanc
Vouvray iwaini chena inotorwa kubva kuChenin Blanc mazambiringa anorimwa padyo nemahombekombe eRwizi rweLoire mudunhu reTouraine reFrance, kumabvazuva kweguta reTours, munharaunda yeVouvray. The Appellation d'Origine controlee (AOC) yakatsaurirwa kuChenin Blanc chete, mazambiringa asina kujeka uye madiki Arbois anotenderwa (asi asingawanzo kushandiswa).
Zuva rekupedzisira rekukohwa kwePINON muma30s
Viticulture ine nhoroondo refu munzvimbo ino uye inodzokera kuMiddle Ages (kana kuti yapfuura) apo iyo
Chechi yeKaturike yaisanganisira minda yemizambiringa pamisha yemamongi yomunzvimbomo. Mazambiringa anozivikanwawo sePineau de la Loire uye anogona kunge akatangira mudunhu reAnjou waini muzana ramakore rechipfumbamwe uye akatamira kuVouvray.
Muzana remakore rechi16 nerechi17 vatengesi vechiDutch vaitarisira kudyarwa kweminda yemizambiringa munzvimbo iyi kuti ishandiswe mukutengesa waini nemisika muLondon, Paris neRotterdam. Mazambiringa kubva kunzvimbo yeTouraine akarongedzerwa kuita musanganiswa mukuru wakanyorwa kuti Vouvray. Nzvimbo dzewaini dzakavakwa kubva mumapako akagadzirwa kubva pakucherwa kwe tuffeau (limestone) matombo akashandiswa kuvaka Chateaux yeLoire Valley. Kutonhora, kwakadzikama tembiricha yemakamuri ekuchengetera waini yaive yakanakira kusimudzira kwewaini inopenya yakagadzirwa patsika methode champenoise system uye yakave yakakurumbira mu18th ne19th century. Vouvray yakava AOC muna 1936 uye inosanganisira musha weVouvray pamwe nemisha misere iri padyo (Chancay, Nouzilly, Vernou-sur-Brenne neRochecorbon).
Nharaunda yeVouvray iri pamusoro pebani, rakaparadzaniswa nehova duku uye matarenda eLoire. Hova dzinobatsira kune yakasarudzika mamiriro ekunze anosimudzira kusimukira kweBotrytis cinerea fungus inokonzera kuora kwakanaka kunoshandiswa kugadzira waini inonaka yedhizeti.
Mamiriro ekunze anonyanya kutenderera kune imwe maritime pesvedzero kubva kuAtlantic Ocean kunyangwe iri munzvimbo inodarika 100 mamaira kumadokero. Mawaini anoenderana nemamiriro ekunze ane musiyano wakakura wevintage gore rega rega nekuda kwekusiyana kwemamiriro ekunze. Kutonhora kwemamiriro ekunze makore anochinja kuwanda kwekugadzirwa kune yakaoma zvitaera zvewaini kusanganisira inopenya Vouvray. Makore anodziya emamiriro ekunze anosimudzira kugadzirwa kwewaini inotapira, yedhizeti.
Nzvimbo yekuchamhembe uye mamiriro ekunze anotonhorera anoita goho muVouvray imwe yekupedzisira kupedzwa muFrance, kazhinji ichimhanya kusvika munaNovember. Zvitaera zveVouvray zvinobva pakuoma kusvika pakutapira uye zvichiri kupenya uye zvinozivikanwa nekunhuhwirira kwemaruva uye kuravira kwakashinga.
Hues dzinobva pamashanga epakati (yewaini inopenya) kuburikidza neyero spectrum kusvika kune yakadzika goridhe (yechembere inotapira Moellex). Kazhinji, muganho wekunhuhwirira padivi rakapfava rehunyoro uye unotumira mazano epear, honeysuckle, quince uye apuro (girinhi / yero) kumhino. Panogona kunge paine zvinyoro nyoro zveginger newakisi (zvichipa huvepo hwekuora kwakanaka… funga Sauterne). Kunhuhwirira pamukaka kunosiyana kubva kuonda, kuoma uye minerality kusvika kune fruity uye kutapira (zvichienderana nemaitiro).
Sec inopa waini yakaoma (isingasviki 8 g/L yeshuga yasara; iyo yakaoma zvakanyanya yeVouvray) uye inowanzo brisk uye inopa minerality.
Minda yemizambiringa yePinon inocherechedzwa seimwe yeakanakisa mudunhu reVouvray uye ndeyemhuri kubva 1786. Francois Pinon akatanga basa rake semwana wepfungwa, achitora nzvimbo kubva kuna baba vake (1987). Pinon anoonekwa seakakomba winemaker uye anotarisa pane organic viticulture uye kushoma kupindira mukugadzira waini. Nzvimbo iyi parizvino inotungamirwa naJulien Pinon.
Minda yemizambiringa iri muVallee de Cousse uko ivhu revhu uye silica rinofukidza chigadziko che limestone ine flint (silex). Pinon anotevera hurongwa hunosanganisira kurima munda wemizambiringa, kudzivirira fetereza yemakemikari nemishonga yezvipembenene uye kukohwa nemaoko. Kudyara kutsva kwese kunoitwa nesarudzo masale (izwi rekuFrance rekurima waini rekudyarwazve kweminda yemizambiringa mitsva nekucheka kubva kumiti yemizambiringa yakasarudzika kubva panzvimbo imwechete kana yakavakidzana); hapana ma clones anoshandiswa. Mazambiringa ake ari pakati pe25 y/o. Iyo estate yakasimbiswa organic muna 2011.
Kuviriswa kwedoro kunoitika mumadhiramu ehuni uye kuchembera musimbi isina tsvina kana foudres (makasi mahombe, anosvika kaviri saizi ye barrique Bordelaise) kuti isvike pachiyero pakati pemichero uye kuderedza. Pane imwe racking yekubvisa heavy lees uye waini inoramba iri pamalees ayo akanaka kutozosvikira mabhodhoro, ayo anotora 12 mwedzi kubva pakukohwa kupedza waini. Pinon anosefa waini yake zvinyoro nyoro kuti ave nechokwadi chekugadzikana uye kugona kuchembera.
Pinon inosarudza mahekita 0.6 enzvimbo dzakapfava, dzakawanda dzevhu-mberi kune sec mabhodhoro ayo. Mazambiringa avhareji yemakore makumi mana. Muchero wacho unokohwewa nemaoko, wakanyatsorongwa uye wadzvanywa. Muto uyu unoyerera negiravhiti mumatangi ekuvirisa ega ega-mbiriso anotora mwedzi 40-2 akamira zvake mukamuri repasi rinotonhora raPinon rakavezwa muchikomo chetuffeau. Waini inochembera pamalees ayo akanaka kwemwedzi 3-4 mukusanganiswa kweoki yakashandiswa kubva pa5-litre oak demi-muids kusvika 500-hectoliter foudres.
Inopa yero yakachenuruka paziso uye inoendesa maapuro ecitrus neyeyero kumhino pamwe chete nerunyoro rweremoni zest uye peel eorenji. Mukanwa unowana michero inowedzerwa nezvinonhuwira uye citrus. Iyo yakareba yekupedzisira inopa minerality yakaenzana uye yakanatswa. Yakabatana zvakanaka nesalmon uye tuna.
Verenga Chikamu 1 pano: Kudzidza nezve waini dzeLoire Valley paNYC Svondo
Verenga Chikamu 2 pano: Mawaini eFrench: Yakanyanya Kugadzirwa Kubva 1970